China kwalenza welding ucingo ucingo ukuze kwezolimo kunye nesicelo mveliso yoMvelisi kunye noMthengisi | Pro kocingo
Inkqubo yemveliso yocingo olwenziweyo oluthambileyo locingo lulula kunolunye ucingo oludibeneyo. Okokuqala, usebenzisa ucingo lwentsimbi oludityaniswe kunye okwesibini ukugqitywa kwidiphu eshushu kwalenza ngaphandle kokugoba. Ukugcina iindleko, siyila lepaneli enemingxunya ngaphandle kwendlela egobileyo kunye ne-L elula ukuyenza. Kodwa ubukhulu becala locingo emva kokutyabeka kwalenza kube yi-4mm kwaye i-zinc camera ayifikanga ifike kwi-450μ / mg ke ngamandla aphezulu kunye nocingo olomeleleyo locingo.
PRO.FENCE ibonelela ngesinyithi ucingo esinyithiweyo socingo kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo, ububanzi beengcingo kunye nokushiya izithuba ngokwemfuno. Thelekisa nabanye okhuphisana nabo, iimveliso zethu zentsimbi zinezibonelelo zayo zokwaleka okuqaqambileyo kunye nokugqibeleleyo kwe-zinc ngaphandle kwentsalela ye-zinc. Oko kuyakukonyusa umhlwa kunye nokwandisa ixesha lokusetyenziswa.
Yeyona khetho ilungileyo ukuba ufuna ucingo olukumgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi kwiiprojekthi zakho. Abathengi bethu abaninzi bayisebenzisa njengocingo lokhuseleko lwezityalo, iipaki zorhwebo, ifama njl.
Ucingo lweDia.: 4.0mm
Iposi: 40 × 40 × 2.5mm
Kugqityiwe: Hot nkxu kwalenza
Into NO.: PRO-05 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Egqithileyo Ucingo lwefama lweenkomo, iigusha, amaxhama, ihashe
Okulandelayo: M-ezimilise Isefu welding enemingxuma Fence (Enye-sifuba Post) kwifama elanga